Abona bantu baphawuleyo ngeGeofumadas -Geofumadas
Ikhaya/ArcGIS-ESRI/Uninzi lwaphawula kwiiGofumadas
ArcGIS-ESRIAutoCAD-AutoDeskGoogle umhlaba / imephuMicrostation-Bentley
Uninzi lwaphawula kwiiGofumadas
Esi sisishwankathelo sezithuba kunye nenani eliphezulu leembono ezibhaliswe, ndikhethile abo bafika ubuncinane de kube ngu-10.
Kwiimpawu zendalo (156)Mhlawumbi into eyenzekayo ngezi zithuba kukuba zinomdla ngokubanzi kwaye zivusa elowo iliva lobuzwe. Nangona ibingumbandela ongezelelweyo kumxholo wenjongo yomhlaba kuphela ... kodwa oko kuthetha ukuba akukho ngaphantsi kwezimvo ezili-156.
(94) Vote kwiimpawu ze-7 zemvelo
(27) Iimpawu ze-7 zemvelo Yintoni eyenzekayo esihogweni?
(18) Ziziphi iimpawu ze-7 zemvelo eziza kuphumelela?
(17) Njani ivoti yeimpawu ze-7 zemvelo?, UJanuwari 2008
Nge-AutoCAD (119) apha uyeza kubalaselisa umba amandla njengento kunyaka 2008 2009 sele usebenzise AutoCAD (!!!) kodwa I nombono apha nenye into incasa engaqhelekanga lwamazwe zethu kokufika baziqhelanise yokuzenza eyaziwa ngokuba imfihlo.
(91) Landa i-AutoCAD 2009 mahala
(15) Okukuzisa okuhle AutoCAD 2009
(13) Funda i-AutoCAD ngevidiyo
Phakathi kwe-Excel kunye ne-AutoCAD (103), kuba kule ndawo ndinike izixhobo ezisombulula iimfuno zemihla ngemihla. Uninzi lwezixhobo zijolise kuzo zombini i-AutoCAD kunye neMicrostation.
(44) Indlela yokungenisa iiDots e-Excel kwi-AutoCAD
(26) Ukusuka kwi-Excel ukuya kwi-AutoCAD, isishwankathelo seyona nto
(10) Yenza ndlela ibhokisi kunye nomgama ukusuka uqondisa UTM
(12) Yakha ipoloni nge-AutoCAD kunye ne-Excel
(11) Ukuthumela ngaphandle kuhambelana ukusuka kwi-CAD ukuya kwi-txt
I-Google Earth kunye nezinye iziphene (98), ukuthini ukuthetha, wonke umntu uthanda iGoogle Earth kodwa bafuna ukubona indlela yokufumana okungakumbi ukuzonwabisa, ukuzonwabisa kunye nokuguquka.
(31) Indlela yokubeka isithombe kwiGoogle Earth
(25) UTM uhlela ku Google Earth
(18)Kwiimifanekiso zeGoogle Earth zilungise kangcono?
(14) EArgentina baya kusebenzisa i-Google Earth ukukhusela ukukhutshwa kweerhafu
(10) Ukuvumelanisa i-ArcGIS neGoogle Earth
Ngama-wiggles kunye ne-ESRI kunye ne-Bentley (57), isithuba sokubulala ulwandle sasitsaliwe, kungoko safumana izimvo ezili-16. Ezinye ezimbini ziziphumo zokunyanzelisa imithambo phakathi kweMicrostation kunye neArcView
(16) Indlela yokubulala ulwandle
(15) Yintoni ephakanyisiweyo ngeenkonzo zeBentley kunye neWMS?
(15) Imveliso ye-ESRI, yintoni na yona?
(11) iminyaka eyi-27 ye-Microstation
Nangona iigqabazo ezichazwe ngakumbi, kwaye ukuza kutsho kwangoku akudluli ukumodareyitha kukuba:
tylenol nge khowudi. isiraphu yokukhwehlela ikhodi. codeine phosphate.
ArcView Bentley Systems ESRI Umhlaba ka-Google egeomates My
Imifanekiso yokuqala ye-satellite ye-0.41 mts.
Indlela yokuqalisa ilayisenisi yeGIS enezinto ezininzi
Ndinqwenela ukuba bendingenawo loo mfanekiso, kodwa emva kokubona uqeqesho oluninzi kumaziko oluntu nawabucala ...
Into kufumana isigqebelo kukuba igosa likamasipala, uyazi wena awukwazi ukuthenga izixhobo zecomputer ze $ 4,000 eboniswe madolw 'anzima kwaye basale phambi mvume opensource. Ayikho kwakubakho kuninzi kula mazwe-nkqubo umcimbi ukonga ikhompyutha evumela ukuba kusetyenziswe ubugcisa zexabiso eliphantsi.
Kodwa ke, ndiza kuthatha ingqalelo izimvo zakho.
Nanku kukho enye into enokumangaliswa kwamanye amazwe ethu aseSpain ngokuqhelana nobugcisa obubizwa ngokuba yi-piracy.
Mmmm awucingi ukuba amanqaku okubhala malunga nalo anceda ukunikela loo mfanekiso? Ndiyathanda kakhulu izithuba zakho malunga nesofthiwe engenakunyulwa ngenxa yokuba ikhululekile 😉